Ciidammada Ammaanka oo gacabta ku dhigay Dhagarqabe ka tirsanaa Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Ciidammada Ammaanka oo gacabta ku dhigay Dhagarqabe ka tirsanaa Al-Shabaab
Ciidammada Ammaanka ayaa howlgal gaar ah oo qorshaysan oo ay ka sameeyeen duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen dhagar qabe ka tirsan Argagixisada Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa inoo xaqiijiyay dhagarta dhagar qabahaan ay ka war haayeen ciidammada ammaanka isla markaana lagu raad joogay in mudo ah.
Wuxuu qaabil sanaa dilalka dadka dadka Shacabka ah iyo Qaraxyada la galiyo wadooyinka si loogu laayo shacabka Soomaaliyeed, sida ay Radio Muqdisho u sheegeen saraakiisha dowladda.
Ciidammada ammaanka ayaa mudooyinkaan danbe sii xoojiyay howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Al-Shabaab, waxaana ciidamada oo kaashanaya shacabka ay ku guuleesteen inay qabtaan maleeshiyaad badan oo Al-Shabaab ah.
Police-ka Galmudug oo la tayeynayo”Sawirro”